Thenga i-CDP choline powder (987-78-0) hplc≥98% | Abaphakeli be-AASraw
/ Imikhiqizo / I-Nootropics powder / CDP i-choline powder
Isilinganiselwa: SKU: 987-78-0. Isigaba: I-Nootropics powder
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza ikhono kusuka kugramu ukuya kokuhleleka kwe-CDP i-choline powder (i-987-78-0), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi elandelwayo.
I-CDP ye-choline powder ividiyo
I-CDP i-choline powder eyisisekelo se-Characters
Ifomula Yamamolekhula: C14H26N4O11P2
Isisindo Yamamolekhula: 488.32
I-Melt Point: I-172-175 ° C
I-CDP i-choline powder ekuthuthukiseni ukusebenza kobuchopho nokuthuthukiswa okwengeziwe
Ukusetshenziswa kwe-CDP ye-choline powder
I-CDP-choline inezinye izinto ezisetshenziswayo ngokuphathelene nokuqashelwa. Ngokuvamile isetshenziselwa ukukhumbuza inkumbulo ebusheni, kodwa naphezu kokufundwa kwezintambo ezibonisa ukuthi lokhu kungenzeka nge-CDP-choline yomlomo, azikho izifundo zomuntu ebusheni ngalesi sikhathi ngesikhathi. Ucwaningo olulodwa luye lwaphazamisa ukunakekelwa kwe-CDP-choline ephansi (okudingeka ilandiswe), futhi i-CDP-choline ingaba nezindima njenge-anti-addictive compound ngokumelene kokubili kwe-cocaine futhi (ubufakazi bokuqala bubonisa) nokudla.
Ngenxa yokuthi i-CDP ye-choline ibekezelelwe kahle, amanani amaningi aqoshwe ngaphandle kokubonakala kwemiphumela emibi kakhulu. Isilinganiso samanani nsuku zonke sendawo kusuka ku-250 kuya ku-1000 mg, noma ngomthamo owodwa noma kwamanani amabili i-8 kumahora we-12 ngaphandle, ngokuvamile kubhekwa njengokuphephile futhi okuphumelelayo.
Ngokuthakazelisayo, isifundo se-MIT sibonisa ukuthi imiphumela umthamo we-4000 mg awuzange uhluke ngokulingana nalawo we-dose 2000 mg, okubonakala kubonisa ukuthi akunani elincane ekuthathweni kwamanani aphakeme kakhulu.
I-CDP choline iyatholakala kokubili ifomu le-capsule ne-powder. I-soluble yamanzi, futhi okungenani i-95% yomthamo womlomo ithola umzimba.
Isexwayiso kwi-CDP ye-powder powder
Izivivinyo kanye nezifundo zemitholampilo zikhombisa ukuthi i-CDP ye-choline ayikho imiphumela emibi kakhulu ebhalwe phansi, ngisho nasezingeni eliphezulu. Izivivinyo ezidakamizwa ziye zabonisa ukuthi azikho imiphumela embi kakhulu ohlelweni lwe-cholinergic futhi lubekezeleleke ngokuphelele, izici ezenza kube kufanelekile ukwelashwa kwezifo ezihlukahlukene, izifo nezinkinga.
Ukuzikhukhumeza, ukukhanda ikhanda, ukuleleka, nokuhudoba kuye kwabikwa ukuthi kunemiphumela emibi. Azikho izifundo ezithinta abesifazane abakhulelwe sebeqedile, ngakho labo abakhulelwe noma abancelisayo bayelulekwa ukuba bayeke ukusebenzisa i-CPD choline.
I-CDP ye-choline iyengeza kakhulu kunoma imuphi uhlobo lwe-supplement yomsebenzisi we-nootropic. Ngokwakho, ingumgqugquzeli wokukhumbula inkumbulo, owaziwa ukuthuthukisa ukukhumbula nokuvimbela ukulahleka kwememori okuhlobene nokuguga, ukugula nokulimala.
Inikeza amandla angqondo engqondo, ukugxila okungcono, nokucabanga okucacile. Ngokuhlanganiswa namanye ama-nootropics kuyinamandla enamandla, futhi lapho ikhonjwe ngemisakazo ikakhulukazi idala imiphumela yokusebenzisana ethatha ukuthuthukiswa kwengqondo kuya ezingeni elingenakutholwa ngalo ngaphandle komunye.
Kuhlolwa amasu eminyaka futhi kuhlolisiswa ngemithi, i-CDP choline iboniswe ukuthi ibekezeleleke kakhulu ngisho nangokwezinga eliphezulu, nakuba ukulinganiselwa okuphezulu akudingekile ukuze kutholakale imiphumela emihle. Ayikho imiphumela emibi ebhaliwe futhi ivunyelwe ukwelashwa kokubili eYurophu naseJapane.
I-CDP ye-choline iyinzuzo engatholakali, etholakalayo kalula etholakala ngokulandela futhi ekhula phakathi kwabasebenzisi be-nootropic. Uma ufuna ukuthola okungcono kakhulu kokugcina kwakho kwe-nootropic, i-CDP choline ngumthombo we-choline ofanele ukuzama.
(1) Ingabe i-CDP i-choline powder isebenza?
I-CDP i-Choline ichithwa yi-Choline ne-cytidine emathunjini, ngemuva kokuwela i-Blood-Brain Barrier ishintshwe emuva ku-CDP Choline lapho isetshenziselwa khona futhi ilandelwa ngama-Acetylcholine receptors okubandakanyeka ekucabangeni nasekubunjweni kwememori. Inzuzo yokuzivikela nge-neuro ebangelwa i-CDP Choline ingabangelwa ngokulondolozwa kokubili kweCardiolipin neSphingomyelin. Enye indlela ephakanyisiwe yokusebenza isisusa se-glutathione synthesis. I-CDP i-Choline ibuye iseze ukuthuthukisa ukubonakaliswa kwama-receptors amaningi anjenge-acetylcholine, i-norepinephrine, ne-dopamine.
Kunezinhlobo eziningi eziguqukayo nakuba kufanele kubhekwe ngokuthuthukisa amakhono okucabanga. Ngenxa yalokho, kunzima ukunquma ukuthi i-CDP ye-Choline ephumelelayo ingaba kanjani umuntu othize. Konke kufinyelela ezitheni zabo kanye nekhono lamanje lokucabangela kanye nokukhetha kokuphila.
(2) IZINZUZO NEMITHETHO
I-CDP i-choline iyinzuzo engcono kakhulu ye-nootropic engenza ezinye izaziso ze-nootropics zisebenze yedwa ukuze zithuthukise izici eziningi zokuqaphela kanye nempilo yobuchopho:
• Ukuthuthukiswa kwememori: I-CDP i-Choline mhlawumbe iyayaziwa kakhulu ngekhono layo lokuthuthukisa imemori nokuvimbela ukulahlekelwa kwememori. Kuvame ukuhlotshaniswa nokulwa nokuguga futhi kuye kwacwaningwa njengendlela yokwelashwa kwesifo se-Alzheimer's.
• Ukwandisa Amandla Engqondo: Ukugcina ukuphakama kwengqondo kubalulekile kuwo wonke umuntu, kusuka kubafundi ababhekene nezivivinyo kubantu asebekhulile ababhekene nokuphuza kwengqondo okuvame ukuhambisana nokuguga. Izivivinyo zemitholampilo zibonise ukuthi i-CDP Choline inomthelela omuhle emandleni engqondo, ikhulisa ama-bioenergetics angama-frontal kanye nokunciphisa ukuncipha kwengqondo okuhlobene nokuguga.
• Ukugxila okungcono nokugxila: I-CDP ye-choline ingandisa ikhono lokugxila ezinkathini ezide ezinokuphazanyiswa okuncane, okubalulekile ekutadisheni, ekufundeni ikhono elisha, noma ekuqedeni noma yimiphi imisebenzi eyinkimbinkimbi neyengqondo. Ucwaningo lubonisa ukuthi lokhu kuyiqiniso ngisho nasezimo ezibucayi kuhlanganise nesifo sohlangothi, ukulimala kobuchopho, nesifo se-Alzheimer's.
• Ukufaka amandla nokuthuthukisa ezinye i-Nootropics: Abasebenzisi abaningi be-nootropic bacabanga ukuthi i-CDP i-choline kufanele ibe nayo lapho ikhiqiza noma yikuphi ukufakwa noma ukuhlanganiswa kwezinto ezingezansi. Umthombo ovelele we-choline, usebenza kahle kakhulu ngama-nootropics ekilasini, okwenza imiphumela yabo ibe namandla futhi ngesikhathi esifanayo kuvimbela ikhanda elincane elithile elihlotshaniswa ne-racetam. Kuye kwaboniswa ukulibazisa ukuqala kokulimala kwengqondo ku-Alzheimer's disease lapho isetshenziselwa ukuhlanganiswa ne-piracetam.
I-CDP ye-choline Marketing Marketing
Indlela yokuthenga i-CDP ye-powder powder kusuka ku-AASraw